Indlela yokukhetha isikhwama esikolweni
Abantwana Amaziko abantwana
Iminyaka yeSikolo imangalisayo ... Ewe, kodwa abaqalayo abaqeshwe esikolweni baye bathatyathwa kwiindawo zabo. Zibaleka, kodwa ngandlela-thile ziyamangalisa. Kwaye, konke kucacile, phantsi kobunzima beencwadi zezifundo, umntwana akayinto yokusebenza, kunzima. Makhe sithethe malunga nendlela yokukhetha isikhwama esikolweni esifanelekileyo kumntwana wakho. Kubonakala ngathi kulula - weza kwiimarike, wabona kwaye uthenge. Kodwa kwakukho. Iphothifoliyo ekhethiweyo engalunganga ingonakalise impilo yakho yomntwana.
Iziphumo zekhethifoliyo ezingalunganga
Ukugqithwa kwiphothifoliyo enzima kuquka nemiphumo emibi ngohlobo lwe-curve of the spine kunye ne-osteochondrosis emva koko. Inyaniso kukuba xa ugqoke ubunzima emhlane, umntwana uncike phambili, ezama ukugcina ibhalansi. Ngelo xesha, umva uphononongo kwaye ulula intanyeni, engagqithanga ngokupheleleyo umzimba womntu. Ukongezelela, isikhundla esingafanelekanga somzimba kunye nesiphene esonteleyo sikhokelela ekungasebenzi okanye ukungasebenzi ngokwalo kwamalungu angaphakathi. Njengoko uyazi, kukho amanqaku amaninzi emgodini ojongene nomsebenzi omhle wale nto okanye elo lungu, ngoko umgudu kufuneka ukhuselwe.
Ngoko ke, njani ukhetha isikhwama sesikolo, ke ungayikhokheli ukunganaki?
Ngoku iimarike zizele iikokhelo eziqhelekileyo, ezithambileyo zenziwe njengesikhwama. Olu hlobo alufaneli umfundi. Ngokukodwa ukuba i-backpack yenziwe ukuba igqoke kwelinye icala. Inguqu ye-post-Soviet-time portfolio ilungele ukunyanga okufanelekileyo. Khumbula, oku kulukhuni, kunye neentambo ezimbini?
Ubungakanani be-knapsack kufuneka kube yinto enokuthi igubungele umva, oko kukuthi, ukusuka entanyeni ukuya enqeni. Kububanzi abufanele ukuba bubanzi kunamahlombe omntwana.
Iimbopho mazibe zibanzi, kungekho ngaphantsi kwama-5 cm, zicatshulwa, zingagqithwanga. Ukongeza, kufuneka zilawulwe. Iimbophelo kufuneka zifakwe nge-double layer of material soft, ukuze ungaphumeleli kumagxa.
Isikhwama sesikolo kufuneka sibe ngaphandle kwenziwe ngeyilinen yelinen, isomelele kakhulu, ukuze ungagqithanga phantsi kobunzima bomthwalo, kwaye ucoceke kakhulu ukuze ihlambuluke kalula. Uyaqonda, abantwana abantwana kwaye baya kuchitha into okanye badaka ngokwabo.
Thatha isikhokhelo ngesandla kwaye uhlalutye ubunzima bayo. I-satchel engenanto ifanele isilinganise ngaphezu kwe-0.5-0.8 kg. Isisindo esiphakanyisiweyo sepotfolioli kunye neencwadi zezifundo akufanele zidlule ngaphezulu kwe-10% yesisindo somntwana. Ngaphandle koko, umntwana uya kunxinwa kwaye ahlupheke emva. Ngoko:
Udidi lwe-1-2 ubunzima be-knapsack kufuneka libe yi-1.5 kg,
3-4 cl. - 2.5 kg,
5-6 iiseli. - 3 kg,
7-8 iiseli. - 3.5 kg,
9-12 iiseli. - 4 kg.
Ingqalelo ekufuneka ihlawulwe emva kwesikhwama. Ukugqwesa, xa kungabhaliwe "i-Orthopedic". Ngokubanzi, iphothifoliyo kufuneka ibe nesiseko esomeleleyo kunye nomqolo onamandla olungisa umlenze. Ubunzima, kunye nokuphakanyiswa kwe-backrest, kufuneka kube yinto yokuba umthwalo we-knapsack awuxinzezeli kumbuyiselo womfundi. Ukongezelela, i-backrest kufuneka ibe nelayini elithambileyo, elenziwe ngendwangu yamatye, okuvimbela ukugubha umqolo wakho.
Uyazi ukuba abantwana bahlala bephazamiseka, ngokukodwa kwindlela, kuya kuba kuhle ukukhetha isikhwama sezinto ezikhethiweyo.
Ngaphambi kokuba uthenge ipakethi yakho oyithandayo, kufuneka uhlale uzama. Ngoko ngokukhawuleza ubone zonke iimpazamo zale ndlela okanye loo mzekelo: iimbopho zifutshane, umva awuhambelani ngokukhawuleza ngasemva, njl. Enye inqaku elibalulekileyo: ungathengi isikhwama sokukhula - umntwana akayi kukhululeka. Kwakhona, ukhethe ukuthenga nomntwana, ukwenzela ukuba ukufunyanwa kukuthanda kwakhe.
Xa uthenge iphothifoliyo, kuyimfuneko ukucacisa kumntwana indlela yokusingatha kakuhle.
Gqoka kuphela emva, kungekhona kwisibambo esisodwa okanye kwelinye icala.
Musa ukuthwala iincwadi ezingekho mfuneko okanye izinto.
Okubhaliweyo kwipotifoliyo kufuneka kubekwe ngokulinganayo kwaye kufakwe ngendlela efanayo ukuze ubunzima buwele kuwo onke amahlombe nangemva.
Namhlanje kukho ezimbalwa ezikhethiweyo ezifanelekileyo kwiimarike, kodwa ngeendlela ezifanelekileyo uza kwenza ukhetho olufanelekileyo, oluya kunceda ukugcina umntwana wakho enempilo.
Kulunge nini ukunika umntwana kwi-kindergarten
Iholide yehlobo e-kindergarten
Yintoni efunekayo kwi-future-grader?
Siqokelela umntwana kwiklasi yokuqala. Ndingayithenga ntoni?
Yintoni endiyenzayo xa umntanami efumana amanqaku amabi?
Ukondla umntwana kwi-kindergarten
Indlela yokuhlela indawo yomsebenzi yomfundi
Umfazi oqhawula umtshato
Ukucoca ngokuqhelekileyo kwindlu ngeFeng Shui
Yintoni i-lupus: iimpawu, izizathu kunye nokunyangwa kwesi sifo
Ubisi olunqambileyo kwi-multivariate
Amafritters avela kwintsholongwane yenkukhu
Ngaba kunokwenzeka ukuxolela uhlanga?
Izifo zesimo senhliziyo kunye neyokuqala uncedo
Abantwana abahle kakhulu babantu abadumileyo
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-beryllonite
Ixabiso lezondlo zamafutha kunye namafutha
Yogurt kunye nobusi
Curd nge cherry
Ndiyakuvuyela umama ngoMatshi 8
Amanqatha amabhanana anemihla kunye nembewu
Izityalo zokuhlobisa ikhaya, indlu kunye neofisi
Amabele amabisi kunye netamatato kunye ne-basil
Kuthekani ukuba umntwana unobunzima?
I-Biography yomdlali we-Valentin Gaft